4 Nzira Nzira Dzemuchina Dziri Kuwedzeredza Yemagariro Midhiya Kushambadzira | Martech Zone
4 Nzira Dzemuchina Kudzidza kuri Kuvandudza Yemagariro Media Kushambadzira
Svondo, Zvita 20, 2020 Svondo, Zvita 20, 2020 Andrei Koptelov
Nevanhu vazhinji vari kubatanidzwa pamhepo pasocial network mazuva ese, midhiya enhau ave chikamu chakakosha cheshambadziro nzira dzemabhizinesi emarudzi ese.
Paive ne4.388 bhiriyoni evashandisi veinternet pasirese mu2019, uye 79% yavo vaive vashandisi vevanhu vanoshanda.
Global State yeDhijitari Chirevo
Kana ikashandiswa zvine hungwaru, kushambadzira midhiya yenhau kunogona kubatsira mukuwana kwekambani, kubatikana, uye kuziva, asi kungova pasocial media hazvireve kushandisa zvese izvo zvemagariro enhau zvakachengeterwa mabhizinesi. Izvo zvinonyanya kukosha ndeye mashandisiro aunoita nzira dzekudyidzana, uye ndipo panogona kuratidzwa mikana kuburikidza nekudzidza kwemuchina.
Tiri kupfuura nekuputika kwedata, asi iyi data haina basa kunze kwekunge yaongororwa. Kudzidza kwemuchina kunoita kuti zvikwanisike kuongorora risingaperi data seti uye nekuwana mapatani akavanzwa kumashure kwavo Inowanzoendeswa nerubatsiro rwe michina yekufunda vanachipangamazano, hunyanzvi uhu hunovandudza nzira iyo dhata inoshandurwa kuita ruzivo uye inogonesa mabhizinesi kuita fungidziro dzakaringana uye zvisarudzo-zvine chokwadi.
Aya haasi iwo ese mabhenefiti, saka ngatitarisei zvakanyanya mamwe mabhizinesi anogona kuvandudzwa nekudzidza kwemuchina.
1. Brand Kuongorora / Yemagariro Kuteerera
Kubudirira kwebhizimusi nhasi kunoonekwa nezvinhu zvinoverengeka, uye pamwe chimwe chezvinhu zvinokanganisa kwavo mukurumbira pamhepo. Maererano ne iyo Yemunharaunda Yevatengi Ongororo Ongororo, 82% yevatengi vanoongorora online ongororo yemabhizinesi, uye yega yega kuverenga gumi kuongororwa paavhareji usati wavimba nebhizinesi. Izvi zvinoratidza kuti kushambadzirwa kwakanaka kwakakosha kune zvigadzirwa, ndosaka vatungamiriri vachifanira kutsvaga nzira yekugadzirisa mukurumbira webhizinesi.
Kuongorora kweBrand ndiyo mhinduro kwayo, iko kutsvagurudza chero kupi kunotaurwa kwechiratidzo munzvimbo dzese dziripo, kusanganisira vezvenhau, maforamu, mablog, wongororo dzepamhepo, uye zvinyorwa. Kubvumidza mabhizinesi kuti aone matambudziko vasati vakura kuita matambudziko uye kuita mukati menguva, kuongorora kwe brand kunopa vatungamiriri kunzwisisa kwakazara kwevateereri vavo, uye nekudaro kunobatsira mukuita sarudzo zviri nani.
Mashandisiro anoita Mashini Anobatsira Brand Kuongorora / Kuteerera Kwemagariro
Sehwaro hwekufanofungidzira analytics, kudzidza kwemuchina kunobatsira kune vanoita sarudzo 'kunyatsonzwisisa mafambiro ese ari kuitika mumakambani avo, kuitira kuti sarudzo dzavo dziwedzere kufambiswa nedata uye kutarisisa kwevatengi, uye nokudaro zvibudirire.
Iye zvino funga nezvese zvataurwa nezvebhizimusi rako rinowanikwa online - mangani acho achave aripo? Mazana? Zviuru? Kuunganidza nekuzviongorora nemaoko hakusi chinetso chinogoneka, nepo kudzidzira kwemuchina kuchimhanyisa maitiro uye kuchipa kuongorora kwakanyanyisa kwechiratidzo.
Kunze kwekunge vatengi vasingafare vanokubata iwe nharembozha kana email, nzira inokurumidza yekutsvaga nekuvabatsira ndeyekuongorora mafungiro - seti yemashini ekudzidza algorithms anoongorora maonero eruzhinji nezve bhizinesi rako. Kunyanya, mabhenji kutaurwa anosvinwa neyakaipa kana yakanaka mamiriro kuitira kuti bhizinesi rako rikurumidze kupindura kumatambudziko anogona kukanganisa mhando yako. Kuisa muchina kudzidza kunoita kuti mabhizinesi atarise mafungiro evatengi zvisinei nemutauro wavakanyorwa, izvo zvinowedzera nzvimbo yekutarisa.
2. Target Vateereri Ongororo
Nhoroondo yepamhepo inogona kutaurira zvinhu zvakati wandei, senge zera remuridzi, jenda, nzvimbo, basa, zvinovaraidza, mari, tsika dzekutenga, nezvimwe, izvo zvinoita kuti pasocial media ive sosi isingagumi yemabhizimusi kuunganidza data nezve avo varipo vatengi uye vanhu uyo wavanoda kuita. Nekudaro, maneja wekushambadzira anowana mukana wekudzidza nezvevateereri vavo, kusanganisira mashandisiro anoita chigadzirwa kana masevhisi ekambani. Izvi zvinofambisa nzira yekutsvaga zvikanganiso zvechigadzirwa uye zvinoratidza nzira umo chigadzirwa chingashanduke.
Izvi zvinogona zvakare kushandiswa kune hukama hweB2B: zvichibva pamatanho akadai saizi yekambani, mari yegore negore, uye huwandu hwevashandi, vatengi veB2B vakapatsanurwa kuita mapoka, kuitira kuti mutengesi asatsvage kuwana iyo saizi-inokwana-ese mhinduro asi tarisa zvikamu zvakasiyana uchishandisa nzira yakakodzera kwazvo kune rimwe boka.
Mashandisiro anoita Mashini Anobatsira Target Vateereri Ongororo
Nyanzvi dzezvekutengesa dzine huwandu hwakakura hwedata yekutarisana nayo — inounganidzwa kubva kunoverengeka kwamanyuko, ingaite senge isingaperi kana zvasvika pakutsvaga vatengi uye kuongorora kwevateereri. Nekuisa muchina kudzidza, makambani anorerutsa maitiro ekuongorora dzakasiyana nzira uye kutora ruzivo rwakakosha kubva kwavari. Nenzira iyi, vashandi vako vanogona kushandisa yakagadzirirwa-yakagadzirirwa dhata kuti vavimbe nayo pavanokamura vatengi.
Zvakare, michina yekudzidza algorithms inogona kuratidza maitiro ehunhu eiri kana iro boka revatengi, ichipa makambani mukana wekuita fungidziro dzakanyatsojeka uye kushandisa izvo kune kwavo kwakanakira mukana.
3. Mufananidzo uye Vhidhiyo Kuzivikanwa
Muna 2020, kucherechedzwa kwemifananidzo uye vhidhiyo kunouya sehunyanzvi hwekuburitsa hunodiwa kumakambani ese anoda kuve nemakwikwi. Zvemagariro midhiya, uye kunyanya netiweki senge Facebook ne Instagram, inopa huwandu husingaverengeke hwemapikicha nemavhidhiyo ari kutumirwa nevaunogona vatengi mazuva ese, kana isiri miniti yega yega.
Chekutanga pane zvese, kuzivikanwa kwemifananidzo kunobvumidza makambani kuona zvigadzirwa zvevashandisi. Uine ruzivo urwu rwakatariswa, iwe unozogona kunyatso tarisa yako mishandirapamwe yekushambadzira kusimudzira nekutengesa-kutengesa kana munhu atove kushandisa chigadzirwa chako, uye kuvakurudzira kuti vazvizame pamutengo unokwezva kana vari kushandisa chigadzirwa chemukwikwidzi. . Zvakare, iyo tekinoroji inobatsira mukunzwisisa kwevateereri vako, sezvo mifananidzo dzimwe nguva inogona kutaura zvakawanda pamusoro pemari yaunowana, nzvimbo uye zvaunofarira pane chimiro chisina kuzadzwa zvakanaka.
Imwe nzira iyo mabhizinesi angabatsirwe nemufananidzo uye vhidhiyo kuzivikanwa iri kutsvaga nzira nyowani chigadzirwa chavo chingashandiswa. Indaneti nhasi izere nemifananidzo nemavhidhiyo evanhu vanoita zviedzo uye vanoita zvinhu zvisina kujairika vachishandisa zvigadzirwa zvakajairika munzira nyowani-saka wadii kuzvishandisa?
Machina Kudzidza Kunobatsira Mifananidzo uye Vhidhiyo Kuzivikanwa
Kudzidza kwemuchina chikamu chakakosha chemufananidzo uye vhidhiyo kuzivikanwa, zvinoenderana nekugara uchidzidziswa izvo zvinogona kungogoneka nekushandisa akakodzera maalgorithms uye kuita iyo system kurangarira iwo mapatani.
Zvakadaro, mifananidzo nemavhidhiyo zvinoita kunge zvinobatsira kutanga zvinofanirwa kuwanikwa pakati pehuwandu hweruzivo hwakawanda hunowanikwa pasocial media, uye ndopaya kudzidza kwemuchina kunofambisa basa iro risingatomboite kana rikaitwa nemaoko. Yakasimbiswa neepamberi michina yekufunda matekinoroji, kuzivikanwa kwemufananidzo kunogona kusimudzira mabhizinesi kune iyo nhanho nyowani yekutarisa, ichipa yakasarudzika nzwisiso nezve vatengi uye mashandisiro avanoshandisa zvigadzirwa.
4.Kutenga Kwevatengi uye Tsigiro Via Chatbots
Vanhu vazhinji nhasi vanoona mameseji senzira iri nyore kwazvo yekudyidzana, izvo zvinopa makambani mikana mitsva yekuita vatengi. Nekusimuka kwenyaya dzakawanda pamwe nekutaurirana maapplication senge WhatsApp neFacebook Messenger, mabhatani ari kuita chishandiso chinobudirira chekushambadzira-ivo vanogadzira ruzivo rwemarudzi ese uye vanogona kushandira kupindura kune zvakasiyana zvikumbiro: kubva pamibvunzo yakajairwa kune mabasa anosanganisira akati wandei akasiyana.
Kusiyana neakajairika maficha ekushambadzira uye mapeji ewebhu, chatbots dzinopa vashandisi kugona kwekutsvaga uye kuongorora vachishandisa social network kana meseji app yavanoda. Uye nepo kushambadzira kwetsika yedhijitari kuchiwanzo kuita kuburikidza nemifananidzo, zvinyorwa, uye vhidhiyo, bots zvinoita kuti zvive nyore kuti mabrands abatanidze kune mumwe nemumwe mutengi zvakananga uye nekuvaka yavo yemunhu-senge hurukuro.
Chatbots Yakasimbiswa neMuchina Kudzidza
Mazhinji ma chatbots anomhanya pamachina ekudzidza algorithms. Kana chatbot iri yakanangana nebasa, zvakadaro, inogona kushandisa neuro-mitauro kuronga uye nemitemo kuendesa mhinduro dzakarongeka kune zvakanyanya kukumbira pasina kuda muchina kudzidza kutsigira kugona kwayo kwakakosha.
Panguva imwecheteyo, kune fungidziro dzinotungamirwa nedhata-dzinoshanda sevabatsiri vakangwara, vanodzidza vachienda kunopa mhinduro dzakakodzera uye kurudziro, uye vamwe vanogona kutoteedzera manzwiro. Dhata-inotungamirwa chatbots inogoneswa nemuchina kudzidza, sezvo ivo vachigara vachidzidziswa, kuchinja uye kuongorora vashandisi zvavanofarira. Pamwe chete, chokwadi ichi chinoita kusangana kwevashandisi nebhizinesi kuve rakasarudzika: kubvunza mibvunzo, kupa ruzivo rwakakodzera, kunzwira tsitsi, uye kuseka, chatbots dzinokumbira kune izvo zvisingakwanisike kushambadziro zvetsika.
Nema chatbots akangwara, mabhizinesi anogona kubatsira risingaperi nhamba yevatengi chero uye chero pavanenge vari. Kuchengetedza mari uye nguva uye kugadzirisa ruzivo rwevatengi, chatbots ari kuita imwe yenzvimbo dzinobatsira AI kuita mari kune epakati-saizi mabhizinesi uye mabhizinesi.
Tags: aichakagadzirwa njereb2bmaitiro maitirobrand yekutarisamuchiso mukurumbirachatbot muchina kudzidzachatbotsvatengi vachinangisatekinoroji iri kubudayepasi rose mamiriro edhijitari mushumokubvuma mufananidzomufananidzo kuziva muchina kudzidzavakangwara vabatsirimachine learningmuchina kudzidza muchiso kuongororamuchina kudzidza munharaunda kuteereramuchina kudzidza pasocial mediapredictive analyticsrubatsiro rwemagariro nevatengiSocial Media Marketingsocial media yakanangwatarisa vateereri kutsvagisavhidhiyo kuzivikanwavhidhiyo inozivikanwa muchina kudzidza
Andrey Koptelov muInnovation Analyst kuItransition, yekambani tsika yekuvandudza software inotungamirwa muDenver. Neruzivo rwakadzama muIT, anonyora nezve nyowani dzinovhiringidza matekinoroji uye zvigadzirwa muIoT, huchenjeri hwekunyepedzera, uye kudzidza kwemuchina.
5 Zvikonzero zveB2B Vashambadziri Kupinza Bhutsu Mune Yadzo Dhijitari Kushambadzira Strategic
ICanLocalize: Zvakachipa Shandura Yako Bhizinesi Saiti Kuti Usvike Vateereri Vatsva